Grass ara-panatanjahantena, Turf ara-panatanjahantena, Mat Grass Mat - Wanhe
Ahitra ahitra DIY ho an'ny fivarotana lehibe
Landscape Grass ho an'ny fivarotana DIY
Ahitra ho an'ny varotra
Ahitra ala ho an'ny zaridaina
Grass Landscape ho an'ny Golf
Landscape Grass ho an'ny kianja filalaovana
Fanovozan-kevitra ho an'ny fanatanjahantena
Fanovozan-kevitra ho an'ny ahitra Multi-Sport
Fanovozan-kevitra ho an'ny ahitra Hockey
Fanovozan-kevitra ho an'ny Rass Grass
Fanovozan-kevitra ho an'ny Grass Football
Fanovozan-kevitra ho an'ny ahitra Landscape
Fanovozan-kevitra ho an'ny fivarotana chaim / DIY
Fanovozan-kevitra ho an'ny Golf
Fanovozan-kevitra ho an'ny kianja filalaovana
Fanovozan-kevitra ho an'ny varotra
Fanovozan-kevitra ho an'ny zaridaina
Wanhe Industrial and Trade Co., Ltd.
Wanhe Grass dia marika Internet avo lenta izay mampiditra R&D, famokarana sy varotra ary manolo-tena ho lasa mpanome tolotra marika tsara ary mpanamboatra eo amin'ny sehatry ny ahitra artifisialy. Huai'an Wanhe Industry and Trade Co., Ltd. dia miorina eo amin'ny Bank of the Beijing-Hangzhou Grand Canal miaraka amin'ny toerana kanto. Tanàna niavian'i Zhou Enlai, lehilahy lehibe nifandimby, Tanànan'i Huai'an, Faritanin'i Jiangsu. Ny lalamby Xinchang sy ny làlambe Beijing-Shanghai dia mamakivaky ny tanàna miaraka amina fitaterana mety. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny ahitra ara-panatanjahantena sy ny ahitra eny an-toerana ary ireo vokatra hafa avy amin'ny orinasanay manokana. Nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amin'ireo mpivarotra sy mpandraharaha maro izahay tato anatin'ny 20 taona. Ny fanondranana dia mitentina maherin'ny 80% amin'ny varotra tanteraka.
Ny tontolon'ny Wanhe Grass ho an'ny golf dia natao sy novokarina arakaraka ny tena fanandramana maintso maitso, manome zava-misy tsy manam-paharoa amin'ny endrika ivelany sy ny fahombiazany. Ny malefaka tonga lafatra dia manome antoka ny fihodinan'ny baolina ary manome fiononana mahafinaritra rehefa milalao eo amboniny.
Ny zavatra niainan'i Wanhe Grass tamin'ny famoronana turf artifisialy ho an'ny fanatanjahantena maromaro dia ahafahantsika manome vokatra avo lenta ho an'ny fampiasana tanjona marobe, toy ny kianja filalaovam-baolina 11 amin'ny lafiny iray sy ny lafiny 7, ny baolina kitra sy ny hockey ary ny taranja baolina kitra sy rugby .
Fantatrao ve fa mihabetsaka ny mpanjifa mividy ahitra artifisialy ao amin'ny Chain Stores na fivarotana DIY? Izy io dia vokatra fivarotana vaovao mafana ho an'ny olona DIY. Wanhe Grass Landscape dia niditra amina magazay Chain fanta-daza ary feno traikefa amin'ny fanomezana fivarotana rojo misy safidy isan-karazany: horonana 2X25m, horonana 1x4m, tsihy 1X1m, pad 30X30cm.
UK - David
Miara-miasa amin'i Wanhe mandritra ny 5 taona miaraka amin'ny ahitra aho. Tena ahitra izy! Mampiasako azy io ho an'ny tetikasako amin'ny sehatr'asa ary mahazo valiny lehibe avy amin'ny mpampiasa farany aho ary mahazo orinasa sy fahombiazana lehibe. Misaotra Wanhe Grass Team. Manoro hevitra an'ity vokatra ity aho!
Raha mieritreritra ny hividy an'ity ho anao ianao dia tsy ho diso fanantenana. Izy io dia manana fahatsapana ahitra tena izy izay ahitra feno kokoa ary mampiasa lava. Vokatra tsara izy io amin'ny vidiny lafo ary mandeha tsara izy io!
Silia - José uiz Picasso
Tena mateza sy vita tsara. Manana faritra mikapoka roa tena hafa hanampiana ny zava-misy. Kalitao ambony! Mpanamboatra tsara! Tsy misy olana amin'ny vokatra mihitsy. Io fotsiny no notadiaviko. Haben'ny tonga lafatra ho an'ny kliobako rehetra.
Meksika - Antonio
Mpanamboatra tena soso-kevitra! Fanaterana haingana. Tsara ny kalitaon'ny vokatra, malefaka ny ahitra ary tena izy. Fitaovana fonosana koa tena tsara. Manana kalitao avo lenta izy ireo ary voamarina ho antsika ny fahafahan'ny famokarana satria fantatray fa afaka manome vahaolana anay izy ireo. Ny vondrona mampiditra sy ny varotra azy ireo dia matihanina tokoa. Kevitra.
Carpets Green Green artificielle ho an'ny tontolo. Tena matihanina ilay mpivarotra ary mailaka namaly ny fanontaniany. Ny orinasa amin'ny ankapobeny dia toa mifantoka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Hanoro hevitra anao aho ny hanao orinasa miaraka amin'ity mpivarotra ity indray amin'ny manaraka.
USA - Garret
Vokatra tena tsara kalitao, ary serivisy tena sariaka, orinasa tena matihanina. Misaotra Wanhe Grass, hiara-hiasa tsy ho ela isika.
IZAY LAZAIN'NY CLIENTSIKA
Astro Turf Soccer Field, Ahitra fanaovan-tany ho an'ny fanaingoana, Football Turf Grass, Lawn artifisialy, Karipetra ahitra sandoka, Ahitra Golf artifisialy,